Impembelelo yokwenziwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni kunye notshintsho | Martech Zone
Impembelelo yokwamkelwa komntwana kubanye abantu kunye notshintsho
NgoLwesibini, Oktobha 27, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiyafunda UKevin EikenberryIncwadi, Ubunkokeli obumangalisayo: Ukukhupha ubuNkokeli bakho obunokubakho ngaBunye ngaxeshanye kwaye sizobe siphunga ikofu kunye noKevin ngomso. Yincwadi emnandi- kwaye isahluko esinye safika ekhaya kunye nam ukuxhasa utshintsho.
UKevin uxoxa ngotshintsho ngokweenkcukacha. Enye yeembekiselo ezisetyenziswa nguKevin yincwadi ka-1962 ebhalwe ngu-Everett Rogers, Ubunzima boTshintsho. Yithiyori emele ukuvavanywa kwexesha… ukubonelela ngengqondo yokuba sibusebenzisa njani ubuchwephesha. Ukwahlulwa ngolu hlobo lulandelayo:
Eyona nto inomdla ngakumbi kuxa ujonga kwakhona ukwamkelwa kwisikali sexesha. Nazi iisampulu zokwamkelwa kwezinto ezintsha:
Oko kwathethi, andiqinisekanga ukuba nabani na uxoxile okanye walinganisa ifuthe loshishino lokwamkelwa. Elinye lamaqhekeza eengcebiso endiwanika abathengi kukuba, nje ukuba indlela yokusebenza iqinisekisiwe kodwa ingekabikho kwesiqhelo, ithuba lokuchaphazeleka kwishishini lakho likhulu. Njengokuba ixesha lihamba kwaye amashishini eqhubeka nokungahoyi ukwamkelwa komntwana, aphulukana namandla alo mpembelelo. Nantsi itshathi yam ithiyori:
Ndibukele njengoko iinkampani zingenile kusekwangoko kakhulu Kwizinto ezintsha ezingafakwanga bungqina kwaye watshona itoni yemali kunye notyalo-mali kwezi teknoloji, uphulukana nayo. Omnye umzekelo wale mihla yikhompyutha. Abaphuhlisi bokuqala kunye nabamkeli betekhnoloji bachitha izigidi kwaye abazivuna izibonelelo; nangona kunjalo, bahlahlile indlela yokubonisa itekhnoloji. Nje ukuba kuqinisekiswe, ikhompyuter yelifu ngoku ibiza kakhulu kwaye ikhula ngokukhawuleza ekwamkelweni kwayo. Impembelelo kumashishini asebenzisa i-computing yelifu ngoku inkulu… kodwa njengoko yamkelwe kulo lonke ushishino, ayisayi kuba yinzuzo kukhuphiswano - iya kuba yinto ephambili.
Njengokuba uphonononga umxube wakho wentengiso kwaye uqhubeka nokungahoyi ukubaluleka komxholo, ukubhloga kweshishini, ukukhangela iinjini yokukhangela kunye nemithombo yeendaba zentlalo… ulahlekelwa lithuba lokujoyina uninzi lwabamkeli ukuba babe nefuthe elibonakalayo kwishishini lakho. Ungaqhubeka nokulinda-ngokuqinisekileyo yi Khu selekile ingaphandle lee. Nangona kunjalo, sukumangaliswa xa ukwamkelwa kwakho emva kwexesha kunganampembelelo kwishishini lakho. Ngapha koko, unokufuna ukwamkelwa nje ukuze uhlale ukhuphiswano kwindawo yentengiso.
Njengomthengisi kunye neteknoloji, ndiyakholelwa ukuba kubalulekile ukuba iinkampani Qhubeka ngetekhnoloji. Anditsho ukuba zonke iinkampani kufuneka zamkele kwaye zamkele kwangoko. Into endiyibonisa kukuba iinkampani ziwamkele amathuba okwamkelwa kwabantwana kwangoko kwaye kunokuba nefuthe elinjani ukuba zinokusetyenziswa kwiingxaki zeshishini labo. Lonke ishishini linemiceli mngeni kwaye itekhnoloji eguqukayo inokuba sisisombululo esisebenzayo kwezo ngxaki.
Umzekelo oqhelekileyo: Ukuba ulishishini elijamelana nentengiso engenayo kunye nokufumana izikhokelo ezifanelekileyo ngoku, ukwamkelwa kwangoko kulingana nokuthengisa kweinjini yokukhangela, ukukhula komxholo (ukubhloga ngeshishini) nokwandisa umxholo wakho ukuya kwinethiwekhi efanelekileyo (inethiwekhi yoluntu). Ngokwamkela kwangoko, unokufumana ukutsiba okuqala kukhuphiswano lwakho kwaye ufumane isabelo sentengiso. Ukuba uyalinda, uyakube usenza ezi zinto ukuze ugcine ixesha elizayo… kwaye nexesha lakho lokufumana liya kube lidlulile.
I-MC Hammer 2.0 kunye neBranding Branding
Udliwanondlebe noSteven Woods: uLwimi loMzimba weDijithali